Ukulungiswa kwe-OPcache PHP yokuqalisa > UVielhuber uDavid
Ukulungiswa kwe-OPcache PHP yokuqalisa09
Kuba website ezisekelwe WordPress , Joomla okanye Laravel , umzekelo, yaye akukho umsebenzisi-ngqo, uyacebiswa ukuba onke amaphepha kwi cache static HTML kwaye kutsha nje i cache ngesandla (okanye ngokuzenzekelayo) ukuba kukho utshintsho kwi somva. Nangona kunjalo, ukuba iphepha linomxholo onamandla oxhomekeke kwiseshoni kunye neicookies okanye kulwimi nakwindawo, i- OPcache ilungile .
Ixesha elibizwa ngokuba li-boot kuzo zontathu iinkqubo ezikhankanyiweyo zingaphezulu kwe-100 ms ngeseva entsha yeCentOS7 (ene-SSD kunye ne-PHP 7.1). Ngalo lonke ixesha iscript se-PHP senziwa, kufuneka sidityaniswe kwi-bytecode ngexesha lokubaleka. I-OPcache ngoku iphumeza i-cache yale bytecode- ukuba iskripthi esifanayo se-PHP senziwa ngesicelo esilandelayo, akufuneki sibuyekezwe. Emva kokuvula i-OPcache, sibeka useto olulandelayo:
Ixesha lokuphumeza (umndilili ongaphezulu kwe-10 wokubulawa) ngoku lincitshisiwe kakhulu:
IWordPress 4.7.4 U-Joomla 3.7 Ulungelelwaniso 5.4
Into 5,5 3,5 8,5
Kuba siseta i-validate_timestamp ukuya ku-0 kwaye ngaxeshanye siphinda siqinisekise_freq ukuya kusuku olunye, i-cache iphantse ayaze yakhiwe ngokuzenzekelayo (siyakwenza oku ngokwenza ngesandla). Nge- hook encinci ye- git , iskripthi se-PHP senziwa ngayo yonke into "yokutsala". Uyenza njani isebenze ihhuku:
Lo msebenzi ulandelayo uncedayo ukulinganisa imilinganiselo yekhowudi nganye (okanye lonke ixesha lokuphumeza):
Ukuba ufuna ukufumana ulwazi oluluncedo olufana nenqanaba, imemori esetyenzisiweyo okanye inani eligciniweyo leefayile, usebenzisa lo msebenzi we-PHP:
Ukuxhamla kwi-OPcache kwindawo yophuhliso lwasekhaya (engacetyiswayo ngokubanzi), sisebenzisa iqhinga.
I-OPcache iyasebenza kuzo zonke iiseva ezineemodyuli ze-OPcache ezifakiweyo kwaye apho iseti ye-opcache enika amandla ingasetwanga ngokucacileyo. Sishiya sinjalo. Simisela kuphela i-opcache.validate_timestamps = 1 kwi-php.ini. Kwiiprojekthi apho sifuna ukwenza i-OPcache ngokusisigxina, sisebenzisa ezinxulumene neprojekthi kwi .htaccessUmiselo olulandelayo:
Emva koko siqala kwakhona iserver yewebhu kwaye senze iskripthi esilandelayo:
Iskripthi siyayicoca i-cache kwaye siyakhe kwakhona ngaxeshanye. Ngoku wabeka i ezinxulumene-mvali wezithuba RunOnSave umyalelo kwi esizithandayo umhleli VSCode: